“BADINGA UKWESEKWA ABAQEQESHI BAKULELI” – Sivubela intuthuko Newspaper
USIMON Ngomane unxusa ukuthi banikezwe ithuba elanele abaqeqeshi baseNingizimu Afrika ukuze bezokwazi ukwenza kahle umsebenzi wabo.
USIMON Ngomane oyiNhloko yeKomiti lezobuChwepheshe kwinhlangano iSouth African Coaches Association uthi sesifikile manje isikhathi sokuthi abalolongi baseNingizimu Afrika nabo bathole ukwesekwa abakudingo njengoba kusuke kwenziwa nakubalolongi base-Europy.
UNgomane uthi baningi abaqeqeshi baseNingizimu Afrika abagcine sebehluleka ukuletha imiphumela emihle enkundleni ngenxa yokuthi kabakutholi ukuwesekwa okubafanele.
UNgomane uthi manje akungabe kusaba khona ukukhetha iphela emasini nabaqeqeshi baseNingizimu Afrika nabo mabasekwe njengoba kwenziwa nakulabo baphesheya kwezilwandle. Lokhu uthi akangabazi ukuthi kungaletha ukukhanya okukhulu kubona bonke abaqeqeshi baseNingizimu Afrika.
Echaza uthe: “Kuyiphutha elikhulu ukuthi kuhlonishwe kakhulu abaqeqeshi base-Europe ngaphezulu kwabalolongi bethu balapha eNingizimu Afrika. Akusilona iqiniso ukuthi abalolongi baphesheya kwezilwandle yibona kuphela abanamandla okuthi balethe impumelelo ebholeni likanobhutshuzwayo laseNingizimu Afrika.’’
UNgomane wenze umzekelo osobala ngoMnuz Cuthered Ramalobeli obehlezi ebhentshini ngesikhathi iBafana Bafana inqoba indebe yeCosafa Cup.
Ngokusho kukaNgomane ubukeka enekusasa eliqhakazile kakhulu uRamalobeli inqobo nje uma ezonikezwa ithuba elanele kungagcini futhi lapho kodwa aphinde akuthole ukwesekwa akudingayo ngaso sonke isikhathi.
Umethulele isigqoko uRamalobeli ngendlela iqembu lesizwe athe belibonakala lihleleke ngalo ngaphansi kwesandla sakhe. Ulimise ngesihloko elokuthi kukude lapho aya khona uma kodwa ezothola ukwesekwa.
UNgomane ugcizelele ukuthi manje sekuyisikhathi sokuthi inhlangano yaseNingizimu Afrika yebhola likanobhutshuzwayo, iSouth African Football Associaton (SAFA) yenze konke okusemandleni ayo ngenhloso yokulekelela bonke abaqeqeshi baseNingizimu Afrika.
UNgomane ukhuluma kanjena nje kuyabonakala ukuthi uya ngokudlondobala kakhulu umqeqeshi wakuleli uPitso “Jingles” Mosimane we-Al Ahly njengoba enenhlanhla yokuthola ukwesekwa akudingayo kuwona wonke amaqembu awalolongayo.